Ny lalao môtô tsara indrindra ho an'ny PC | Vaovao momba ny gadget
Ny lalao video dia tsy isalasalana fa ny malaza indrindra amin'ireo fanatical an'ny hafainganam-pandeha sy adrenaline, anisan'ireo tena nilalao dia ny lalao video, fa ahoana kosa raha izay no tadiavintsika dia ny mamoaka ny fihenjanana rehetra ao ambadiky ny môtô? Manana safidy isan-karazany isika rehefa misafidy izay lalao hilalaovantsika, saingy mazava kokoa fa ambany noho ny katalaogna izay hitantsika amin'ny resaka lalao video hazakazaka fiara.
Manana karazany isan-karazany amin'ireo ohatra vitsivitsy misy isika, satria nanomboka tamin'ny simulateur ny tompon-daka eran'izao tontolo izao amin'ny moto, ka hatrany amin'ny mcrcross, izay misy ny fitsambikinana sy ny fitsangantsanganana goavambe amin'ny fotaka. Amin'ity tranga ity, ny peripheral voafidy hilalao dia ny fanaraha-maso lavitra, satria ny familiana tsy mety indrindra amin'ny fitondrana môtô, ary sarotra ny mahazo kopian'ny moto miaraka amina swingarm hampiasaina ao an-trano. Amin'ity lahatsoratra ity dia handeha amin'ny antsipiriany izahay hoe iza no tsara indrindra lalao moto ho an'ny PC.
2.1 Mode online
3.1 Mode online
4.1 Mode online
Ity no simulator an'ny môtô miorina amin'ny MotoGP World Championship, miaraka amina replika mitovy amin'ireo havoana hitantsika amin'ny tena tompon-daka sy ireo mpitaingina azy ihany, satria saga fanao isan-taona io dia mitohy hatrany eo anelanelan'ny kinova, noho izany dia mifidy ilay kinova izahay mifidy ny gameplay dia hitovy. Mazava ho azy, mampiseho fa mihaino ny mpankafy azy ny studio, noho izany ho hitantsika ireo lesoka maro voamarina tamin'ny fizarana teo aloha, ankoatry ny fisehoana sary vaovao.
Na dia hita miharihary aza, ny tombony lehibe indrindra amin'ity lalao video ity dia ny ofisialin'ny sary rehetra dia ofisialy, noho ny fahazoan-dàlana amin'ny Tompondaka Erantany, hanana ny tena ekipa, mpanamory, moto ary boribory izahay. Tsy ho an'izao tontolo izao ihany io ny kilasy premier, manana an'izay hitantsika rehetra amin'ny Moto2, Moto3 ary 500cc kapoka indroa koa isika ary ny MotoGP manan-tantara kapoka efatra na ny maody MotoE vaovao.
Manasongadina ihany koa ny maody asa feno izay ahafahantsika manao sonia ny tena ekipa na mamorona ny azy. Raha tokony ho fifaninanana hazakazaka tsy misy famporisihana, ankoatry ny fifaninanana dia mila mitantana lafiny maro amin'ny asa aman-draharaha matihanina amin'ny alàlan'ny mpanamory fiaramanidina isika, ao anatin'izany ireo mpanohana, manao sonia mpiasa na manatsara ny fari-taninay.
Manana maody an-tserasera ho an'ny mpilalao roa ambin'ny folo isika izay nampidirina ary afaka mankafy amin'ny fomba samihafa, toa ny miady hevitra amin'ny fifaninanana ho an'ny daholobe sy ny tsy miankina na misafidy ny hifaninana amin'ny vanim-potoana vaovaon'ny eSport. Izany rehetra izany dia amin'ny serivera manokana izay manome antoka ny filamatra tsara hilalao tsy misy lag. Ity lalao ity dia havaozina tsikelikely avy amin'ireo mpamorona azy noho izany dia mihatsara miaraka amin'ny patch tsirairay avy.
Ny lalao Motocross izay nahita ny hazavana na dia teo aza ny areti-mifindra, ny lalao dia mitazona ny hatsaram-panahy rehetra teo alohany fa mihatsara be eo amin'ny sehatry ny sary. Ity no lalao voalohany ahafahantsika milalao amin'ny maha Jorge Prado, mpanamory fiaramanidina galisiana izay misolo tena an'i Espana amin'ny lalao. Mandeha lavitra hatrany ny feo manodidina ary mamerina ny tabataban'ireo moto tsy mbola nisy toy izany toy ny feo sy fampaherezana ny vahoaka amin'ny mpanamory fiaramanidina.
Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, ity lalao ity dia ahitana ny boriborintany 19 mandrafitra ny vanim-potoana 2020 aorian'ny fampidirana an'i Lommel sy Xanadu amin'ny an-tsipiriany. Anjarantsika izao ny 68 mpitaingina sokajy samihafa, manomboka amin'ny 250cc ka hatramin'ny 450cc ary koa ny zavatra ofisialy maherin'ny 10.000 mba hampiavaka ny estetika rehetra sy ny fahombiazan'ny moto.
Tsy dia taraiky lavitra eo amin'ny sehatry ny lalao ka ao anatin'izany ny klasika Asa, Grand Prix, Fitsapana ora ary Championship. Ao amin'ny lalam-by ny làlan-kizorana, ny tanjontsika dia ny manomboka amin'ny ambany indrindra miaraka amin'ny mpanamory fiaramanidina manokana izay hamboarinay araka izay itiavantsika azy ary hahazo traikefa sy mpanohana hiakatra ambony izahay.
Ny maody multiplayer dia mety tsy ho nanjavona, nanatsara be indrindra ity fizarana ity anisan'izany ny farany mpizara voatokana. Io dia ahafahana milamina kokoa ny lalao tsy misy lag lagy izay manimba ny hazakazaka. Manana maodely Directeur Race ihany koa izahay hamoronana ny fifaninananay manokana ary alefanay mivantana amin'ny alàlan'ny fanomezana ireo fakantsary.
Saga an'ny mpamorona MotoGP izay manome fahitana hafa momba ny atao hoe hazakazaka amin'ny môtô, misarika fahitana tsy dia matotra. Andao lazaina fa ny gran turismo an'ny môtô, miloka amin'ny simulation amin'ny fampiasana saika moto an-dalambe izay eritreretintsika.
Ao amin'ny fizarana fahefatra hitantsika a endrika ivelany namboarina izay tonga hameno ny konsolin'ny PS5 sy Series X manaraka ary koa ny PC matanjaka indrindra. Sambany isika no hahita ny toetr'andro andrasana izay mamela antsika hanomboka lalao amin'ny rahona matevina ary hamita ny orana be. Tafiditra ao ihany koa ny tsingerin'ny alina sy ny alina mba hahafahantsika manomboka hazakazaka amin'ny tolakandro ary hamita azy ireo amin'ny takariva.
Ny maody lalao dia tsy miova firy amin'ny teo alohany ary manomboka amin'ny maody asa isika ary ny safidintsika voalohany dia ny ligim-paritra izay kasainay hanombohana ho matihanina. Miankina amin'ny safidintsika dia hazakazaka amin'ny boriboritany iray na hafa izay tsy maintsy andalovantsika fitsapana samihafa hiakarana. Ny lalao dia mitaky amin'ny resaka filalaovana ary manome zava-misy betsaka nefa koa fahasarotana avo lenta raha te-hitantana haingana ny tendrombohitra isika.
Manana garazy sy vola azontsika atao izahay rehefa mandroso amin'ny lalao, ny tanjonay dia ny hameno ity garazy ity amin'ny moto amin'ny famindra toerana rehetra. ary manatsara azy ireo amin'ny farany ambony. Rehefa mandroso amin'ny lalao isika dia hanao anarana ho an'ny tenantsika ary izany dia hanome antsika fotoana hitsambikina amin'ny ligy manerantany sy ny SuperBikes manerantany.
Ny katalaogin'ny moto dia mahatratra ny sary Moors ofisialy 175 avy amin'ny mpamokatra 22 samihafa, nanomboka ny 1966 ka hatramin'izao. Etsy an-danin'izany dia mahita be tampoka isika Boriborintany 30 tena izy, averina reraka. Ny fizarana sary dia nokarakaraina tamim-pitandremana, miisa amin'ny scanning laser ho an'ny laser sy ny mpanamory fiaramanidina. Ny fihetsik'ireo mpitaingina moto sy moto mihetsika dia tena zava-misy, mazava tsara ny ora sy ny fikarakarana natokana ho an'ny faritra hita maso.
Ny lalao dia manana maody an-tserasera somary tsotra miaraka amin'ny maody lalao vitsivitsy, saingy ho fanandramana litmus henjana izy ireo hanehoana hoe iza no mpamily tsara indrindra amin'ny Internet amin'ny hazakazaka miaraka amin'ny mpilalao 12 iraisam-pirenena. Misy maody maoderina betsaka kokoa tsy hita, ary koa maody maody multiplayer an-toerana.
Ny tena ankasitrahana dia manana servisy natokana ho anay izahay, noho izany dia ho tonga lafatra ny fahalefahana sy ny kalitaon'ny lalao. Amin'ny ankapobeny ny multiplayer dia tsara ary mandeha tsara, na dia manana tsiro mangidy mangatsiaka aza isika raha raisintsika ny haben'ny lohateny sy ny fikarakarana nomena ny sisa amin'ireo fizarana.
Ny lalao motocross quintessential notohanan'ny marika zava-pisotro Monster izay ahitantsika mpitaingina, faribolana ary ekipa ofisialin'ny Tompondakan'i Amerika. Ny zavatra misongadina eo amin'ny zava-drehetra dia ny haavo haavo avo lenta izay hitantsika amin'ity lohateny ity. Azontsika atao ny misafidy amin'ny endrika, marika, loko amin'ny fiarovan-doha, solomaso, baoty, fiarovana, sticker ... Raha vantany vao vita ny andiam-bararata, dia hiasa amin'ny tanjontsika hahatratra ny tampony isika.
Miatrika lalao isika fa raha tsy simulator madio dia tsy arcade feno, noho izany ny fanarahana tsara ireo fampianarana dia hanampy antsika betsaka rehefa mitondra fiara. Tsy misy fomba sarotra, noho izany ny fizotran'ny fahasahiranana dia handroso, hatramin'ny voalohany dia tsy mora ny mandresy hazakazaka, fa hiharatsy hatrany ny raharaha rehefa mandroso isika. Tsy ho mora ihany koa ny mitazona ny bisikileta, ka ho mahazatra antsika ny mikapoka ny tany amin'ny alàlan'ny fanisana diso kely.
Manana maody antsoina hoe Complex izahay, izay ahitantsika ny endrika mivelatra miorina amin'ny nosin'i Maine, izay hankafizanay ny fiara maimaim-poana kilometatra hitsapana ny fahaizantsika. Manana circuit SuperCross vitsivitsy ihany koa izahay ary iray amin'ny MotoCross ahafahanao mandray anjara amin'ny namanao.
Ny fizarana sary dia miankina amin'ny PC ananantsika, fa raha manana milina tsara isika dia hankafy hazakazaka tsiranoka miaraka amin'ny sary mety, nohatsaraina ny firafitra sy ny ora fandefasana. Manonona manokana ny fizika an'ny moto ary indrindra ny làlana. Ny faritra sasany dia misy faritra feno fotaka, izay handaozan'ny bisikiletintsika ny làlany sy hikororosy ny fotaka. Ny sary dia miaraka amina feon-kira tsara, izay manasongadina ny vatolampy sy ny tabataban'ny feo mampiteny ireo fantsom-pivoahana.
Eto no ahitantsika vaovao tsy dia be loatra, satria tsy miova firy ny fomba multiplayer raha oharina amin'ny teo alohany, fa afaka mankafy hazakazaka miaraka amin'ny mpilalao 22 isika. Ny lalao dia manana mpizara voatokana izay hisorohana ny fijaliana tampoka na fahatapahana raha mbola avelan'ny fifandraisana izany. Azontsika atao ny mandamina ny fiadiana ny tompon-daka eo amin'ny fiarahamonina amin'ny alàlan'ny maody Director Race, izay ho mpikarakara ary afaka mandefa ny tompon-daka amin'ny kalitao avo lenta.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » an-trano » Videogames » Ny lalao môtô tsara indrindra ho an'ny PC